Waliinga'iinsa tajaajila baqaqsanii hodhuu: hojmanee fayyaa isa ijoo
Waliinga'iinsa tajaajila baqaqsanii hodhuu: hojmanee fayyaa isa ijoo Featured
Qulqullina wal'aansi baqaqsanii hodhuufi xiyyeeffannaan kennamuu qaba
Finfinnee: Yeroo tokko tokko tajaajilli fayyaa dhukkubsattootaaf dhaabbilee fayyaa garaa garaa keessatti kennamu bu'aasaa caalaa miidhaansaa kan heddummaatu ta'ee mul'ata.
Tajaajilicha yeroodhaan ykn bifa si'ataa ta'een battaluma dhukkubsataan achi qaqqabetti argachuu dhabuun, tajaajilichi kennamu immoo qulqullina barbaachisu guuttachuu dhabuuniifi meeshaaleen qorannoo dhibee sanaa bifa guutuu ta'een horachuu dhabuun rakkoolee tajaajila fayyaa kana keessatti mul'atan keessaa isaan muraasa.
Keessattuu, tajaajila fayyaa baqaqsanii hodhuun walqabatee Itoophiyaatti jijjiiramni hamma tokko mul'achaa kan jiru ta'us hojiin guddaan kan hafu ta'uu Waldaan Ogeeyyota Ulfaafi Gadameessaa Itoophiyaa ni ibsa.
Yaa'ii waldichi kibxata darbe adeemsifamerratti haasaa kan taasisan pireezdaantiin waldichaa Doktar Darajjee Nigusee, sochii jijjiirama damee fayyaatiif biyyattii keessatti taasifameen fooyya'iinsi jiru abdachiisaa ta'uu himanii, rakkoon hanqina walinga'iinsaa baqaqsanii hodhuufi qulqullinaan walqabatee jiru garuu ammas xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadu ta'uu dubbataniiru.
Keessattuu waliinga'iinsi tajaajila baqaqsanii hodhuu hedduu xiqqaa akka ta'e himanii, kunis naannolee gurguddoofi magaalota gurguddoo qofa keessatti kan daanga'e waan ta'eef hawaasa bal'aa bira akka qaqqabuuf sochiin cimaan kan barbaachisu ta'uu ibsu.
Waliinga'iinsa tajaajila baqaqsanii hodhuu cinatti dhimmi tajaajila qulqullina qabuufi sadarkaasaa eeggate kennuus dhimma yeroon gaafatu ta'uu kan eeran Dr Darajjeen, yaa'iin waldichas dhimma kanarratti bal'inaan mari'achuudhaaf bu'aawwan qorannoo garaa garaa dhimmichaan walqabatan hedduu sassaabuusaa himu.
Waldichis waldaa ogeeyyotaa ta'uusaatiin ga'een inni rakkoolee kana keessatti taphachuu qabuufi taphachaa jiru olaanaa ta'uusaafi keessattuu barumsiifi leenjiin walirraa hincinne mata durewwaan garagaraa irratti kennamaa jiraachuu dubbatu.
KGT 2fa damee fayyaa keessatti dhimmoota gurguddoo xiyyeeffannoo argatan keessaa inni tokko qulqullinaafi waliin ga'iinsa tajaajila fayyaa ta'uu kan himan immoo Ministir Deetaa Ministeera Fayyaa Dr Kabbadaa Warquu, kanarraa ka'uudhaan sagantaa 'saving lives through safe surgery' jedhu hojirra oolchaa jiraachuu dubbatu.
Waldaan ogeeyyotaa kunis sochiiwwan ministerichaan taasifaman gama ogummaasaatiin tumsaa jiraachuu himanii gara fuula duraattis bifa qindaa'eefi qorannoowwan saayinsaawaa irratti hundaa'een sochii rakkoolee kanniin furuuf taasifamu akka deeggaruuf waamicha dhiheessaniiru.
Torban kana/This_Week 12411
Guyyaa mara/All_Days 1821831